Laser na-acha anụnụ anụnụ & Violet
Nabata na TorLaser!
TorLaser bụ oru amụrụ na 2009 site na mmasị nke ọtụtụ ndị na-akwado ya maka ụwa nke laser.
O bilitere site na mkpa ịnye saịtị saịtị ọkachamara na ntụgharị laser nke ezigbo ike n'ọnụ ọnụ dị ọnụ ala ka onye nkuzi ọ bụla wee nwee ike nwe ngwaahịa dị mma na ọnụahịa kacha mma.
Ndị na-acha uhie uhie bụ ndị mbụ pụtara ruo ihe karịrị afọ iri atọ, yabụ enwetala nnukwute ala na ọnụahịa dị ala. Ihe ngbanwe nke ihe uhie uhie sitere na 630nm ruo 670nm. Ha achaghị acha karịa acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mana kama ike ya nke ịcha ọkụ dị elu. Igwe na-acha uhie uhie dị mma maka ụdị ojiji ọ bụla: ọchị, nnwale, ihe ngosi…
A na - ejikarị ntụpọ laser akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ugbu a karịa, n'ihi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-achapụ ọkụ karịa ugboro isii karịa anya mmadụ karịa ọbara ọbara. Mgbasa nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ sitere na 6nm ruo 500nm, 550nm guzobere dị ka nke kachasị. Lasers Green dị mma maka ụdị ojiji ọ bụla: ihe ọchị, mbara igwe, foto, nnwale, ihe ngosi, akara ngosi, ihe ngosi, ugwu, ichu nta, njiri…
Ngwurugwu isi ọwụwa na-acha anụnụ anụnụ na violet egosipụtara, bụ ihe kachasị esiri ike na ịchọta. Ọfụma na-ejikọta nnukwu nke ọkụ na-ekpo ọkụ na ike iji gbaa ọkụ. Ihe ngbanwe nke ihe eji acha anụnụ anụnụ bụ 445nm na violet 405nm. Ihe na-acha anụnụ anụnụ na violet dị mma maka ụdị ojiji ọ bụla: ntụrụndụ, foto, nnwale, ihe ngosi na ọbụna blues maka mbara igwe!
ANYI ANYI ANYI
Naanị ezigbo ike
Ezigbo foto na vidiyo
Ọnụ Ahịa Kacha Ahịa
Anyị ga-eme ngwa ngwa o kwere omume.
2009-2020 - Kwadoro site na TORLaser.com® - Asambodo Akwụkwọ ikike Laser